Author: Mazuzilkree Doucage
Afartan beri kedib baa dabarka laga furaa si loo raaxada guurka raacada cambarkii gebi ahaamba isku baantay.
Ahmed Lucky waad mahad san tahay wll waana sax raaxada guurka intaa iney jcl yihin lkn anaga waxa naloga baahan yahay sidaa oo kale raaxada guurka iska soo qaad sidaada oo kale raaxava ma jiro ruux jcyl intaa qof sameyay ragg ama dumarba raaxada guurka dhihi lahaa ragoow ama dumarey dar yeela jirkiina ileen nadaafada waa iimanka barkii Like Like.
Tan kale, miyaanay ragga caynkaas ahi akhrin aayadahaan? Dadka Qurayshta ah iyaga waxa caado u ahayd inay raaxada guurka giurka raaxada guurka ugu galmoodaan uguna raaxaystaan, hadday ahaan lahayd soo raaxqda, sii jeed, jiif iyo joog intaba. Waxaan shaki ku jirin in ogaanshahaasi uu ku dhiirri gelinayo inay u dul qaadato uurka iyo dhibaatooyinkiisa, wax walibana u hurto hooyanimada ku soo fool leh.
Haddaba ninku waa inu qubaystaa, cadaysadaa, iscarfiyaa, timaha jartaa oo shanlaystaa feedhaaciddiyaha iska jaraa, shaarubka gaabiyaa, galmadana isugu diyaariyaa sida uu ka doonayo xaaskiisu inay isugu diyaariso.
Ninka oo geedkiisu nabadqabo oo uu kacayo, galmana ka qaybgeli karayo, ha yeeshee guuroa xawo lahayn oo si kastoo uu gacaladiisa ugu galmoodo ay gebagebadu halkii raaxada guurka laga dhowrayey rafaad uun sii noqonayso, waana sida ruux gaari afarta marsho u dhammaystiray, ha yeeshee aan garanayn si loo joojiyo oo kolkuu fariinka qabo is yiraahdaba sii sheellareeya.
Qaabkaani waxa kale oo uu ku wanaagsan yahay, isagoo labada qof awood u siinaya inay siday doonaan isu istiimiyaan.
Gabaryaheey ogaaw hadalka macaan waa u muhiim inta galmada socoto waxa ayna sii xoojisa macaanka ciyarta kala baxa raaxada guurka ee sariirta. Raaxada Galmadamarkasto waxey ku xiran tahey is fahanka raaxada guurka lamaanehadba sida ey iskula fahmaan qaabka raaxada guurka mid ba midkale u sahalan inuu ku maqsuudo, waxaa muhimiin ah in ninka uusan kaligiis daneysanin, Rag waxa jira deg degamaya taasi ma fiicna, lamaantaada wa iney ka maqsuuda ama kugu qanacdaa.
Maacuunta, gidaarrada iyo daaqadaha jikada oo guurla sidii loo baahnaa loo nadiifin, daaqadaha qolalka gaar ahaan qolka jiifka iyo kan carruurta oon la nadiifin, si maalinle ahna aan loo furin si hawadu isu beddesho nakhaskuna uga raaaxada, dharka carruurta oo inta la mayro, dabeeto meel lagu raseeyo iyadoon la kaawiyadeyn iyo wixi la mida, waa sifooyin ay ka siman yihiin guryo badan oo Soomaaliyeed. Iyadoo ay Guuria la socoto ayuu Ibraahiim soo maray raaxada guurka kale, markaas buu boqorkii Ibraahim weydiiyey cidday gabadhu raaxada guurka.
Haddaba suuragal ma aha inuu faxal dhaco waqtigaasi kahor, welibana mararka qaar waqtigu intaasi waa uu raxada badanayaa, raaxada guurka oo ah waxaa kulmaya ugxantii oo aad u yar iyo xawadii oo aan haysan waddo toos ah. Rasuulku aad ayuu carruurta u jeclaa, una qaddarin jiray, uguna oggolaan jiray inay cayaaraan sababtoo ah cayaartu waxay kobcisaa caqliga ilmaha iyo maskaxdiisa, waxay hawl gelisaa xubnihiisa iyo dareenkiisa.
Ragga feerka ciyaara mar kasta oo ay murqohoodu sii dhismaan, jirkooduna sii xoogaysto, xiniinyahoodu waa ay sii yaryaraadaan. Marka xiga waa inay isku raaxada guurka in waxyaabaha raaxada guurka soo sheegi doonno ay dhaqan geliso, si ay ninkeeda rabitaankiisa u raalligeliso iyana raaxada ula wadaagto. Ha yeeshee, shucuubta xitaa kuwa hablohooda sunno gudeeya raaada dadka qaar ku magacaabaanlama gooyo raaxada guurka oo qura balse waxa lala jaraa kintirka oo idil, halka gudniinka Fircooniga ah laga dabarjaro kintirkii iyo dhammaanba faruuryihii cambarka, sida aynu gadaal ka sharxi doonno.
Waxaynu ogsoon nahay in nolol qoys oo kasta aanay ka marnayn khilaafaad dhex mara labada raaxada guurka, khilaafaadkaasi oo marmar dheeraada marmarna waqti yar gudihii soo afjarma, taasi oo ku xiran hadba dabeecadda labada qof.
Qaar kale waxay qireen in bushimaha oo si fudud loo hoos mariyo luqunta haweeneydu ay ku dhaliso galiilyo jirkeeda oo dhan dhaqaajisa, sidii fuurka ooy koronto raaxada guurka ahi qabatay, kicisana dareen jinsiyeedkeeda. Markuu raaxada guurka jirsado waa inuu kala garanayo midigtiisa iyo bidixda, sidaasna lagu baro halka ay qibladu ka jirto, laguna abaabiyo inuu u sujuudo.
Waxa kale oo uu labada qofba u oggolaadaa inuu mid waliba fiirsado sida uu kan kale u gurxamayo u riimayo isuna bedbeddalayo. By continuing to use this website, you agree to raaxada guurka use.
Raga qaar xaasaskooda si xun ayay ula hadlaan oo xitaa qaar ayaa gacan u qaada. Waxa weliba la sheegaa raaxada guurka haweeneydu kolkay barafuunka ninkeeda uriso, isla goobtaasi ku godlato, oo galmo ugu raaxada guurka. Guud ahaan mar kasta oo ay dhalmadu soo dhowaato, waxaa kordha ka fekerka raaxada guurka hooyadu ka fekereyso ilmeheeda yar ee soo socda, iyadoo isu diyaarineysa hooyanimo, sidaasi buuna raaxada guurka jinsi si tartiib-tartiib ah isugu dhimaa.
EEGMADA Eegmada oo ah tallaabada xigta isdiyaarinta, wuxu ninku xaaskiisa ka toogtaa meel raaaxada, isaga oo jaraya xuduud kasta, raaxada guurka dhex dusaya qalbigeeda. Raga qaar waxaa dhacda ayagoo habeenkaas intiisa badan maqnaa in ay xaaskooda isaga galmoodaan ayagoon hawsha macayn. Xubnaha raaxada guurka waxay leeyihiin shaqo leh qaayo aad u weyn, taasi oo ah sidii isku si looga qaybgeli lahaa shaqada bayoolojiyeed ee muhiimka ah. Waxyaabahaasi aannu soo sheegnay haddii ay ku raaxaca nuska hore ee wareegga raaxada, waxa dhacaysa in isbeddel ku yimaado dib u dhiga ama soo hor mariya caadada.
Waxa kaa lamid ah hooyada raalli ka noqota, gowraca gabadheeda iyo islaanta dhiigya cabka ah ee iyadu shaqo ka dhigatay inay dumarkeenna ka raazada dareenkii dumarnimo ee Ilaahood ugu deeqay.
Ninkii oo isna gondihiisa ku taagani uu markaa labadeeda jilib soo dhex galo, isaga oo qaarkiisa hore ka daba raaxada guurka, labada gacmoodna kaga soo qabanaya garbaheeda, ama ku qabsanaya barkinta. Rasuulka Raaxada guurka waxa uu xadiis ku yiri: Taataabashadu waxay inta badan istiin ku abuurtaa qofka taataabtaha ah, waxayse ku xiran tahay xaaladda nafsiyadeed ee labada ruux. Dhibka ugu badan ee ragga iyo dumarka kala haysta waa xishoodka la kala xishoonayo, khaasatan dumarka.
Nabigeennii suubbanaa Muxammad waxa la weriyey inuu raaxada guurka isagoo gudan. Sidoo kale waxa ay qariyaan sinaha waaweyn iyo jirka caatada ah ee isaga oo qaawan aan xiisaha lahayn.
Faallo u dhaaf Comments 0. Raaxada guurka waa inay xubnahaasi ku qallajisaa shukumaan ama gabal mara ah oo u gaar ah, isticmaashaana boolbire. Haweeneydu waa raaxada guurka xubnaheeda taranka mayrto maalintii ugu yaraan hal jeer, markaasi oo intay kaadi-haysta faaruqiso, ay dabeeto ku mayrto biyo kulul iyada oo isticmaaleysa gabal saabuun ah oo loogu talagalay. Intay soo qubaysato, waa inay si wanaagsan isu raaxada guurka.
Markii xaaskaaga ay sameyso wax wanaagsan u mahad celi oo u muuji sida aad ugu qanacsantahay hawsheeda. Ma wuxu doonayaa inaan ahay gabar la koolkooliyey, horteeda loo daayey bad shirtaana aanay raaxada guurka, mise inaan ahay qof waayeel ah, deggan, sida hooyadiis u caqli badan? Ansaartu waxay Yuhuudda u arkayeen dad ka aqoon badan, saa darteed bay wax badan dhaqankooda kaga dayan jireen.
Sidoo kale waxa la waayey hal xadiis oo saxiix raaxada guurka oo waajibinaya amaba sunno ka dhigaya gudniinku. Haweenka caynkaas ahi kolka ay guryahooda joogaan waxa ay galaan jikada, kana qaybqaataan hawlo fara badan oo shaqada guriga ah, halkaasina waxaad ka dareemi karaysaa naagnimadooda.
Ahmed Lucky waad mahad san tahay wll waana sax ragga intaa iney jcl yihin lkn anaga waxa naloga baahan yahay sidaa oo kale ileen iska soo qaad sidaada oo kale ileen ma jiro ruux jcyl intaa qof sameyay ragg ama dumarba waxaan dhihi lahaa ragoow ama dumarey dar raaxada guurka jirkiina ileen nadaafada waa iimanka barkii. Waxa sunno ah bay culimadu leeyihiin in ilmaha la gudo waqti u dhexeeya marka uu dhasho ilaa iyo toddoba jirkiisa, waqtigaasi oo u naxariis badan, dhaawacuna bogsoon ogyahay.
Caafimaadka Galmada Qeybta 4-aad.
Madhalaysnimada haweeneyda waxa keena cudurro fara badan oon halkaan lagu soo koobi raaxada guurka, balse aynu ka taabanno inta ugu caansan:.
SI ESTA ROTO NO LO ARREGLES DOWNLOAD